Tsy misy fitoriana tonga any amin’ny polisy : nisy naka an-keriny ny tompon’ny Fidahoussen | NewsMada
Tsy misy fitoriana tonga any amin’ny polisy : nisy naka an-keriny ny tompon’ny Fidahoussen
Ny alarobia alina teo, tokony ho tamin’ny 8 ora alina no nanjavona ny karana iray tompon’ny Fidahoussen eny Tsaralalana. Araka ny fanazavana azo, niala teny an-toerana izy tamin’io ora io, ary tokony namonjy fodiana teny amin’ny Village des jeux Ankorondrano, saingy tsy tafody. Voalaza fa efa niantso ny fianakaviany izy talohan’ny niaingany teny Tsaralalana, izay efa fomba fanaony, saingy tsy tonga tamin’ny ora fahatongavany. Nanomboka teo no nitaintana ny fianakaviany satria tsy tafody mihitsy ity karana tompona orinasa eny Tsaralalana ity. Tsy azo an-telefaonina intsony koa izy io nanomboka teo. Raha ny omaly, mikantona tanteraka ny Fidahoussen eny Tsaralalana.
Rehefa nanontaniana momba ity tranga ity ny polisy, nilaza fa tsy mbola nisy fampilazana olona tsy hita na resaka fakana an-keriny teny amin’izy ireo. “Mandray andraikitra avy hatrany ny polisy raha misy fitoriana tonga eo am-pelatanany. Hatramin’izao tsy mbola nisy izany. Matetika ireo karana tsy mampilaza ny polisy raha misy fakana an-keriny eo anivon’izy ireo, izay olana matetika amin’ny asa ataon’ny polisy”, hoy ny fanazavana azo.
Avotra ilay nafenina teny Ambohidratrimo
Raha ny fanazavana azo, talohan’izao, nisy karana nisy naka an-keriny ihany koa, ka tamina trano iray teny Ambohidratrimo izy io no hita. Iray hafa kosa ary efa tafaverina eny anivon’ny fianakaviany. Samy mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa ireto karana nisy naka an-keriny ireto.
Raha ny vokatra faran’ny azon’ny polisy mikasika ny fakana an-keriny, karana ihany ny atidoha amin’ireny fakana an-keriny ireny. Efa nisy tratra farany teo. Miara-miasa amin’ireo jiolahy efa malaza amin’ny kidnapping ihany izy ireo. Amin’ity farany, mety karana ihany ny ambadika?